Baqattoota Oromoo Yemen: Lubbuun teenya lubbuu sareellee hanqatte – Welcome to bilisummaa
Haala hamaa Baqattoonni Oromoo Biyya Yemen Keessa Jiran ,,,,
Nuti Baqattoonni Oromoo Biyya Yemen haala akkaan Sodaachisaa keessa jirra dhugumattuu haalli amma keessatti argamnu dhugaan suukaneessaadha Rakkoon Amma biyyattii keessatti Uumame Isa boroota Darbeerraa adda Kun baqataadhaaf dhumaatii lubbuu Malee kan carraa biraa hin irraa gara magaalaa biraatti sosso’uufis keninee dha. Sababnis baqattoonni kun bakka jiran irraa gara biraa biyyattii keessa Sosso’uun dhoowwaa waan taheef. kunis Sababa hallellaan xiyyaaraa guutummaa biyyattiitti gaggeessu irraa kan ka’e. carraan baqattoonni Oromoo qaban Daandii gubbatti dhumuu qofa tahuu Oromoon hubadhaa.
Oromoon Abbaa dhabuun lubbuun Lammii Oromoo saree hanqattee lammiin Oromoo Mana hidhaa Keessatti rasaasaan Ajeefamuun gaafatama Oromoon dhabuu akeeka Adunyaa tana gubbaa jaarmayaan dhiiga oromoof falmu Lammii oromoo Irraa kaasee dhabamuun dhiigni lammiiwwan oromoo bakkaayyuu mixiin lafaa arraabuu agarra sabni bal’aan kun dhageettii dhabee saba bicuu gaditti tuffatamee jiraachuun qaanii guddaa osoo tahee jiruu Nutis walii hadooddiin dhabamee Gurra walirraa cifachuun Du’aaf wal saaxiluun gatii hin qabaatu qofa carraan jiru
Tags Baqattoota Yemen
Previous Birraatv: SAGANTAA KESSUMMA DHIMAA WERARAMUU DACHI OROMIYAA RATII KESUMOOTA 2 WALIIN TURTII TAASISEE JIIRA DAWADHAA.
Next New Dirama Afaan Oromoo (Sin Dabrin)